Yini ihlangabezane izifo kanye izinambuzane sea buckthorn
Izifo kanye izinambuzane seabuckthorn aziziningi kangako. ESiberia, esikhulunywa abantu abaningi inkathazo plant Sandthorn Mol. Esikhathini Non-Black Earth - olwenziwa gallic futhi aphid Sandthorn. Kodwa isifo esibi kakhulu isitshalo liye labizwa ngokuthi "Verticillium buna."
Izifo kanye izinambuzane seabuckthorn
Uhlala Trans-iBaikal esifundeni. Lapho efihlekile ziqala ukuba sikhukhumale, izibungu amagciwane inyonyoba ngaphakathi, ukudla kude ekujuleni kwenhliziyo. Ehlobo izinyanga amacimbi akha izidleke zawo kusukela kuwebhu, edonsa ndawonye amahlamvu 6 eziqongweni amahlumela. Kodwa bakhetha pupate enhlabathini. Ngasekupheleni kuka-July - isikhathi ukuvela izimvemvane kusukela iziphungumangathi, futhi ngemva kwenyanga, lezi izimvemvane amaqanda entsha ku emagxolweni isiqu ezansi sezihlahla kanye namahlamvu liwile. Ukushikashikeka inundu sishaye usebenzisa "trichlorfon" ngaphambi ihlumela kuqhuma.
Lena isinambuzane kuyingozi kakhulu ngoba ulwandle lalesi sihlahla, okuyinto okudiliza kwezitshalo ngokuphelele. Fly ehlala Altai. Kusukela engxenyeni yesibili Juni kuze kwesigamu Agasti lesibili liyaqhubeka iminyaka izinambuzane. I izibungu amagciwane isivele ngemuva kwesonto elilodwa le wokwakha luzoqala esithelweni, bedla inyama yabo. I amajikijolo omnyama futhi ukushwabana, bese ngokuphelele ewa. Emasontweni amathathu kamuva, ethutha izibungu enhlabathini lapho pupate futhi overwinter. Ukuze kuliwe inkathazo ubhekwa indlela ephumelela kakhulu wokunisela 0.2% "trichlorfon" engxenyeni July lesibili.
Izifo kanye izinambuzane seabuckthorn aziziningi kangako. Enye yalezi zinhlobo baba Sandthorn aphid. Amagciwane kuthinta amaqabunga. Ubusika aphid uhlala ngesimo amaqanda eduze izinso. Lapho izinso uxoshwa, ijusi usengumfana kushiya zibe ngukudla kwezinyoni izibungu. Futhi lapho amaqabunga abavuthiwe ngokuphelele, izibungu kuxazululwe on abangaphansi kwabo. Abesifazane-rasselitelnitsy amaphiko ezivumela ukuba ihambe emasimini amasha futhi ubelethe umntwana aphid entsha. Amahlamvu, umonakalo inkathazo, ekuseni ophuzi, kabili phezu nokuwa. Labhujiswa yilezi izinambuzane lalesi sihlahla 10% "malathion", futhi Iziphungo kanye infusions amazambane noma amaqabunga utamatisi, u-anyanisi nesweli khoba ize iyofinyelela embewini, ugwayi leaf kungenziwa olufuthwe, unezela isixazululo insipho.
Lalesi sihlahla olwenziwa gallic
Izifo kanye izinambuzane sea buckthorn zihlanganisa eyodwa ngaphezulu omele - umkhaza. Yena ukhetha amaqabunga ezihlabayo ebusika luhlala e izinso sinuses. I olwenziwa lincane kakhulu (kungabonwa kuphela ngesibonakhulu), kuba mhlophe. Amagciwane ngokoqobo okushiya amaqabunga abasha bese encela ijusi amahlamvu awo emahle ovuthiwe, ukwakha bese kuba khona ukuvuvukala flat - the Gauls. Lokhu amahlamvu ewa ekuseni. Yilwa izibungu kudingeka indlela efanayo ama-aphid.
Verticillium Isihenqo Sesithombe
Lona isifo esiyingozi kakhulu, kusukela lapho ehlupheka lalesi sihlahla. Izinambuzane Izifo, ezichazwe ngenhla, akuyona ingozi njengoba Verticillium ukubuna. Kuze kube manje, luhlala ezingelapheki. Sitholakala zonke izindawo seabuckthorn kulinywe. It usumisiwe ukuthi ejenti uvala uhlelo conductive zalesi sihlahla, futhi ehlathini uyafa. Ngo-Agasti, igatsha ngabanye (noma wonke amahlamvu) phuzi futhi ewa, obuswacile amajikijolo amagxolo eba amabhamuza bese liqhume. Ngu ngonyaka ozayo, lesi sitshalo uyafa.
Imvukuzane: control inkathazo
Earwig ezivamile: incazelo, izithombe, lokho kuyingozi futhi kanjani ukuqeda
Indlela ukuqeda umuvi isidleke ngendlela esifike ngesikhathi?
Kufanele olusanda kuzalwa kangakanani ukulala?
Isicelo "iHedgehog" yephepha elimibalabala: kanjani ongayenza?
"UJack no Jill": nabalingisi izindima
Khetha izibambo zomnyango
Igama usuku Taisia eSontweni Lobu-Orthodox
Ama-steroid ukuze kwemisipha ukukhula hormone ukukhula
Izindlela kwengqondo nomphakathi: kusukela ucwaningo nokuqeqeshwa
A. P. chehov, "Vanya": Isifinyezo imisebenzi